I-Debian 11 iza ne-Linux 5.10, izibuyekezo zephakeji, ukuthuthuka nokuningi | Kusuka kuLinux
Ngemuva kweminyaka emibili yentuthuko, yethulwa ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kukhishwe uhlobo olusha lwe I-Debian 11.0 Bullseye, inguqulo leyo iza nenqwaba yezinguquko ezinkulu futhi lokho futhi kunamaphakeji kanambambili angama-59551 endaweni yokugcina (amaphakheji womthombo angama-42821), okucishe kube ngaphezulu kwe-1848 kunalokho okunikezwe ku-Debian 10.
Uma kuqhathaniswa ne-Debian 10, 11294 binaries entsha ingeziwe, ama-9519 (16%) asephelelwe yisikhathi noma ashiywe amaphakheji asusiwe, amaphakheji abuyekeziwe angama-42821 (72%). Usayizi ophelele wawo wonke amafonti ahlinzekwa ekusatshalalisweni uyimigqa yekhodi engu-1.152.960.944. Abathuthukisi abangu-6208 babambe iqhaza ekulungiseleleni ukwethulwa.
1 Izici ezintsha ze-Debian 11 Main
2 Landa bese uthola i-Debian 11
Izici ezintsha ze-Debian 11 Main
Kule nguqulo entsha eveziwe, singathola ukuthi i-kernel ye Linux 5.10kanye nezindawo zedeskithophu IGNOME 3.38, KDE Plasma 5.20, LXDE 11, LXQt 0.16, MATE 1.24, Xfce 4.16 namathuluzi wokuthuthukisa i-GCC 10.2, LLVM / Clang 11.0.1, OpenJDK 11, Perl 5.32, PHP 7.4, Python 3.9.1, Rust 1.48, Glibc 2.31.
Engxenyeni yezicelo ezinikezwa ku-Debian 11, singathola I-FreeOffice 7.0, ICalligra 3.2, I-GIMP 2.10.22, i-Inkscape 1.0.2, i-Vim 8.2, I-Apache httpd 2.4.48, BIND 9.16, Dovecot 2.3.13, Exim 4.94, Postfix 3.5, MariaDB 10.5, nginx 1.18, PostgreSQL 13, Samba 4.13, OpenSSH 8.4.
Isifaki sokuqhafaza sinikela ngokwakhiwa nge-libinput esikhundleni somshayeli we-evdev, othuthukisa ukwesekwa kwephedi yokuthinta, kanye ne-underscore kuvunyelwe egameni lomsebenzisi elicaciswe ngesikhathi sokufakwa kwe-akhawunti yokuqala nokufakwa kwamaphakeji kwanikezwa ukuxhasa ukubonwa kwesistimu, uma ukuqaliswa kutholakala ezindaweni ezingaphansi kolawulo lwakho. Kusetshenziswa ingqikithi entsha ye-Homeworld.
Isifaki inikeza amandla okufaka ideskithophu ye-GNOME Flashback, eqhubeka nokwenziwa kwekhodi yephaneli yakudala ye-GNOME, imenenja yefasitela leMetacity, nama-applet ayetholakala phambilini njengengxenye yemodi ehlukile ye-GNOME 3.
Mayelana nokuthuthuka okwethulwe ku-Debian 11, singakuthola lokho I-UPS ne-SANE zinikeza amandla okuphrinta nokuskena ngaphandle kokufaka kuqala abashayeli kumaphrinta nezikena ezixhunywe ohlelweni nge-USB port. Imodi engenashayeli isekela amaphrinta wesikena ne-IPP Yonke indawo lapho kwenziwa khona amaphrosesa nama-scanner: Izivumelwano ze-eSCL kanye ne-WSD (ama-sane-escl kanye nama-sane-airscan backends asetshenzisiwe).
Kungezwe umyalo omusha "ovulekile" ukuvula ifayela kuhlelo oluzenzakalelayo lohlobo lwefayela olucacisiwe. Ngokuzenzakalelayo, umyalo uhlotshaniswa nensiza evulekile ye-xdg, kepha futhi ingaxhunyaniswa nesiphathi se-run-mailcap, esibheka ukubopha kohlelo lokubuyekeza ezinye izindlela lapho luqala.
I-Systemd isebenzisa isigaba esisodwa, esihlanganisiwe seqoqo leqembu (iqoqo le-v2) ngokuzenzakalela. Umehluko omkhulu phakathi kwamagroups v2 no-v1 ukusetshenziswa kwesigaba esijwayelekile samacroups kuzo zonke izinhlobo zezinsizakusebenza, kunokuba kuhlukaniswe ama-hierarchies okwabiwa kwemithombo ye-CPU, ukuqunjelwa kwememori, kanye ne-I / O.
Futhi, i-kernel ine- umshayeli omusha wesistimu yefayela ye-exFAT inikwe amandla ngokuzenzakalela, engasadingi ukufakwa kwephakheji ye-exfat-fuse. Iphakheji lifaka ne-exfatprogs package enesethi entsha yezinsiza zokwenza nokuqinisekisa i-exFAT FS (isethi yakudala yama-exfat-utils nayo ihlala itholakala ukufakwa, kepha ukusetshenziswa kwayo akunconyiwe).
Iphasiwedi ezenzakalelayo hashing algorithm yi-yescrypt esikhundleni se-SHA-512.
Kungezwe amandla wokusebenzisa amathuluzi ukuphatha iziqukathi zePodman's sandbox, kufaka phakathi njengokufaka okusobala kweDocker.
Kufaka phakathi abashayeli bePanfrost neLima, abahlinzeka ukusekelwa kwamaMali GPU asetshenziswa kumabhodi womama asekelwe ku-ARM.
I-intel-media-va-driver isetshenziselwa ukusebenzisa amathuluzi okusheshisa wokuqopha ividiyo ahlinzekwa ama-Intel GPUs ngokususelwa kubuchwepheshe be-Broadwell kanye nokusha.
IGrub2 ingeza ukusekelwa kwendlela ye-SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting), exazulula izingqinamba ngokususwa kwesitifiketi se-UEFI Secure Boot.
Uhlelo lwe-win32-loader, olukuvumela ukuthi ufake i-Debian kusuka ku-Windows ngaphandle kokudala imidiya yokufaka ehlukile, ingeza ukusekelwa kwe-UEFI ne-Secure Boot.
Isifaki sokuqhafaza sisetshenziselwa ukwakhiwa kwe-ARM64.
I-Xfce single CD imaging imisiwe futhi i-2 & 3 DVD ISO imaging iyekisiwe ngezinhlelo ze-amd64 / i386.
Si ufuna ukwazi kabanzi ngayo, ungabheka imininingwane Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Landa bese uthola i-Debian 11
Kulabo abanentshisekelo yokukwazi ukuzama le nguqulo entsha ye-Debian 11, kufanele bazi ukuthi itholakala kwezakhiwo eziyisishiyagalolunye ngokusekelwa okusemthethweni nezithombe zokufaka ezitholakalayo (nge-GNOME, KDE, LXDE, Xfce, Cinnamon neMATE ) ingalandwa ku-HTTP, jigdo noma kwi-BitTorrent.
Lokhu ungakwenza kusuka ku- isixhumanisi esilandelayo.
Ukuvuselelwa kwe-Debian 11 kuzokhishwa iminyaka engu-5.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » I-Debian 11 iza ne-Linux 5.10, izibuyekezo zephakeji, ukuthuthuka nokuningi